Sidee loo Helaa Ogolaanshaha Safarka? e-Shaashadda Shahaadada Ruqsadda Safarka ee Dowladda | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraSidee loo Helaa Ogolaanshaha Safarka? e-Shaashadda Shahaadada Ruqsadda Safarka ee Dowladda
Sidee loo Helaa Ogolaanshaha Safarka? e-Shaashadda Shahaadada Ruqsadda Safarka ee Dowladda
19 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Garoomada, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Sidee loo heli karaa dukumintiga ruqsadda safarka?
Sidee loo Helaa Ogolaanshaha Safarka? e-Shaashadda Oggolaanshaha Safarka ee Dowladda: Maxaad u baahan tahay inaad hesho Ruqsadda Safarka? Kumaa heli kara Dukumentiga Ogolaanshaha Safarka?
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan wuxuu sameeyay bayaankan "Safarada ku meel gaarka ah waxaay ku qasbantahay ogolaanshaha xukumada" ee ku saabsan ruqsadaha safarka ku meel gaarka ah. Sida ku xusan wareegtada websaydhada Wasaaradda Arrimaha Gudaha; Safarka baska ku-meel-gaarka ayaan suurtagal noqon doonin marka laga reebo muwaadiniinta leh shuruudaha loo arko inay ku habboon yihiin guddoomiyahooda. Muwaadiniinta u dhintay qaraabada darajada koowaad ama qaba cudur daran iyo muwaadiniin aan haysan meel ay ku noolaadaan, gaar ahaan shan iyo tobankii maalmood ee la soo dhaafay, waxay codsan karaan gudoomiyaasha ama gudoomiyeyaasha degmo si ay u helaan rukhsad safar.
Intaa waxaa sii dheer, kuwa caddeeya inay ku lug leeyihiin wax soo saar iyo habraacyo sahay ah oo ka yimid qolalka aqoonta u leh, iyo kuwa ah saraakiisha sare ee dadweynaha iyo adeeg bixiyaasha dowladu ma yeelan doonaan xayiraad safar.
SIDEE LAGU CODSANAYAA SHAHAADADA FASALKA TRAVEL?
Muwaadiniinta waajibka ku ah inay u safraan inta udhaxeysa magaalooyinka waxay dalban doonaan Gudiga Oggolaanshaha Safarka, kaasoo lagu dhisi doono isuduwidda gudoomiyaasha iyo gudoomiyaasha dagmada, oo codsadaan dukumenti safar. Kuwa codsigooda loo arko inay ku habboon yihiin, dukumiintiga ogolaanshaha safarka baska waxaa soo saari doona guddiga, oo ay ku jiraan dariiqa safarka iyo muddada. Qorshaha safarka baska waxaa sameyn doona Guddiga Ogolaanshaha Safarka dadka ku habboonna waa lala socodsiin doonaa.
Guddiga Ogolaanshaha Safarka ayaa liis garayn doona liiska muwaadiniinta ku safri doona bas, taleefannadooda, iyo liisaska rakaabka, cinwaanadooda lagu tilmaamay halka ay u socdaan, oo u tagaya maamulka magaalada ee la booqdo. Basaska loo oggol yahay inay safraan waxay kaliya joogsan karaan joogsiyada basaska gobollada ee marinnada safarka waxayna qaadi karaan rakaabka loo oggolaaday inay ku safraan golayaasha gobollada halkaas oo ay ku istaagaan haddii ay jirto faraqa u dhexeeya awoodooda. Adeegyada basaska shirkadaha basaska waa la mamnuucayaa.
YAA HELI KARA FUUQADADA TRAVEL?
Wasaaradda Arimaha Gudaha waxay u dirtay wareegyo dheeri ah gudoomiyaasha gobolada, iyaga oo dejinaya shuruudaha ka reeban xanibaadaha soo galitaanka gawaarida. Wareegtada, oo ay kujirto waxyaabaha ka reeban ee ku saabsan dalabka, dadka heli kara rukhsadda Safarka ayaa lagu taxay sida soo socota:
Kuwa laga soo saaray cusbitaalka lagu daweeyo oo doonaya inay ku noqdaan guryahooda, kuwaas oo loo gudbiyo warbixinta dhakhtar ama helay ballan ballan iyo kontorool.
Kuwa u safri doona si ay uga qeyb galaan aaska naftiisa ama afadiisa, ehelkiisa darajada koowaad ee dhimatay, ama walaalkiis.
Kuwa raaci doona wareejinta aaska, waxay bixiyeen inaysan ka badneyn 4 qof, marka laga reebo kuwa sababta dilkooda ay tahay coronavirus.
Kuwa doonaya inay dhammeeyaan howlahooda militari oo ku noqdaan degsiimadooda.
Kuwa lagu casuumay qandaraas maalmeedka khaaska ah ama kuwa guud.
Kuwa laga soo daayay xarumaha ciqaabta
Ka dib markii ay ka yimaadeen dibedda, 14 maalmood oo karantiil ah iyo ilaalo inta lagu gudajiro dhismayaasha ay leeyihiin Hay'aduhda Amaahda iyo Hoyga dadka lagu meeleeyay.
Ogolaanshaha wuxuu ku xaddidan yahay tirada rakaabka ee baabuurta khaaska ah.
SHARCIYADA MADAXWEYNAHA TRAVEL MA LAGA HELI KARAA INGIRIISKA?
Xafiiska Isbadalka Dijitaalka ah ee Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in Dukumiintiga Ogolaashaha Safarka laga heli karo e-Dowladda wixii hadda ka dambeeya. Qoraal uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka, “Muwaadiniinteenna ku dhex safri doonta qiyaasta coronavirus-ka looma baahna inay aadaan golayaasha degmooyinka. Codsiyada Ogolaanshaha Safarka ayaa ku yaal bogga internetka e-Government.
Ka codso marin-haweedka e-Government.
HALKAN SI AAD U HESHO DUGSIGA FASALADA TRAVEL
Codsigaaga waxaa loo gudbin doonaa Guddiga Ogolaanshaha Safarka oo waxaa qiimeyn doona Guddiga.
Kadib qiimeynta ay sameeyeen Gudiga Oggolaanshaha Safarka, codsadayaasha waxaa lagu ogeysiin doonaa sms iyadoo loo yaqaan "Codsigaaga waa la aqbalay" ama dalabkaaga waa la diiday.
Muwaadiniinta codsiyadooda laga aqbalayo waxaa laga aqbali doonaa Codsiyada Loogu Talagalay ee lagu abuuray boosteejooyinka basaska ama gegooyinka diyaaradaha, ka dib markii lagu caddeeyo lambarkooda TR ID.
TILMAAMAHA SHAHAADADA CADAADISKA TRAVEL
Codsiyada Ogolaanshaha Safarka ee Soosaarayaasha Shaaha Bilaabmay
Ogeysiiska Qaadashada: Soo iibsiga Kioskiska Nooca Shaxda Muujinaya Smart
Mashruuca Tareenka ee Shanleyntu ma ogolaanayno Qorshaha Dawlad Goboleedka
Ururka Dabbaasha ee Yakutiye oo ka tirsan Baarlamaanka TRT
Waa maxay liiska qiimaha kormeerka baabuurta? (2014-shaashadda baaritaanka qiimaha baaritaanka baabuurta)
Tababbarka Shahaadada Amateur Seaman iyo Shahaadada Howl wadeenka Raadiyaha Gaarka ah
Shahaadada SRC waxaa sidoo kale ku jira e-Government
Maanta oo Taariikh ah: 20 Meey 1933 oo leh khadka Sivas-Erzurum
Ogolaashaha Mustaqbalka Mustaqbalka ee Mustaqbalka ee Ankara
Nidaamka Dammaanadda Lacagta ee sanadlaha ah ayaa la beddelay!
Wasaaradda Gaadiidka Oggolaanshaha Gaadiidka